Cadaadi H264 File
Files H.264 waa files heerka codec video in ay yihiin inta badan caan ku ah waxa ay la eego tayada shaqo riixo. Qaar badan oo sida videos waxaa la abuuray isticmaalaya kaamirada iyo daayey HDTV channel ama ku jira cajalladaha Blu-ray taageera qaabka sare halka dammaanad tayo sare leh marka la barbar dhigo bitrates aad u hooseeya. Waxaa wax laga xumaado, waxaa jira waqtiyo aan u baahan nahay in ay geliyaan video files inay webka ama ku kaydsan iyaga laakiin waxaa jira mid aad u weyn.
Sidee baa nin keliya qaniinaa file video ama foomka ay ku qaadato ka dib markii riixo farqiga badan marka la eego tayada dhamaadka iyo muddada ay u qaadato inay ku dhameeyaan riixo. Waxaa jira qalab video riixo badan oo loo isticmaali karo in cadaadin files H.264. Mid ka mid ah qalab sida waa Wondershare Video Converter.
Wondershare Video Converter Ultimate saamaxaya kuwa isticmaala si loogu badalo ma badalo videos oo kaliya laakiin sidoo kale nuqul ka DVDs, qaataan tafatirka fudud, la abuuro videos iyo iyaga wadaagaan online. Intaa waxaa dheer, qalab ogol yahay dadka isticmaala si ay u abuuraan Tifaftirayaasha videos qaababka in la jaanqaadaan qalabka kala duwan. Waa ay fududahay ah in la isticmaalo qalab la user interface saaxiibtinimo.
Sida caadiga ah, marka software la bilaabay, waxaa baadhaa casriyeysan ka hor inta ugu dambeyntii loading muraayada ah. Dashboard, sida ku cad shaashada kor ku xusan ayaa shaaca ka qaaday sifooyinka badan in qalabka dhammayn karo. Ugu bar ugu korraysa, waxaa jira fursado si loogu badalo, gubi iyo soo bixi videos. In bar hoos ku qoran yihiin fursadaha in aad ku darto files, DVD load iyo qaab wax soo saarka. Kuwani waa furaha ka shaqeynayaan in ay muhiim yihiin ku degsatay hawlaha qaab beddelidda. Hoos dib tallaabooyin muhiim ah in la raaco riixo ee H264 files isticmaalaya Wondershare Video Converter.
Tallaabo 1: Ku darista files
Haddii loo maleeyo in software ay horey u furan yahay iyo interface default muujiyay in shaashada ee kor ku xusan waa furan yihiin, talaabada ugu horeysaa waa in aad ku darto files H.264 in la cadaadiyo,. Waxaa jira laba siyaabood oo loo marayo oo faylasha lagu dari karaa.
Doorashada hore, user a riix kartaa software-ka ee "Add Files" button. Tani furi doonaa sanduuqa wadahadal in ka dibna waxaa loo isticmaali doonaa in ay helaan videos il H.264 sida hoos ku qoran ah.
Haddii kale, dadka isticmaala si fudud u soo jiidi kartaa jeedi files H.264 ay si toos ah codsiga ee suuqa kala hoose. By si fudud u soo jiiday iyo tagtey faylasha, users dajiyaan karaa files kala duwan si fudud iyadoo xulashada files, oo xajinaya hoos u muhiim ah gacanta iyo kuwa jiidaya in codsiga ee user interface. Ka dib markii faylka (s) ayaa lagu soo bandhigay sida thumbnail ah (s) ee item saxaarad, user iyaga kuu diyaarin karaan sida la doonayo. Waa in la ogaadaa in codsiga u ogolaanayaan in diinta ee video files galay qaabab kala duwan iyo habka iyaga compressing.
Talaabada 2: Doorashada qaabka la doonayo wax soo saarka iyo qalab
Qaab saarka ayaa go'aaminaya tirada cusub ee faylka. Waxaa jira qaabab badan oo ka kaas oo isticmaala dooran kartaa sida hoos ku qoran.
Kale oo ka duwan qaabka, users sidoo kale dooran kartaa qalabka kaasoo files Tifaftirayaasha waxaa loogu talo galay. Qalabkaas oo ay taageerayaan ku qoran yihiin oo dhan magac keentay la tixgeliyaa. Qalabka ciyaaraha ayaa sidoo kale ka mid ah oo ku xiran qalabka aad doorato, software ah oo u dhiganta doonaa talinaynaa qaab ku haboon diinta iyo riixo in ay isu barbar-beegyada uu qalabka iyo waafaqid.
Talaabada 3: Dooro goobaha
Marka qalab qaab ama bartilmaameedka ayaa la sameeyey, ka dibna users dooran kartaa goob ku haboon filimka. Settings si toos ah saamayn ku soo saarka dhamaadka ka dib markii riixo. Waxaa jira fursado badan oo format in user a dooran kartaa. Users gacanta shakhsiyeeyo karaa koobin kala duwan oo ay ka mid yihiin heerka yara, heerka jir, ama xal, iyo kuwo kale. Users dhali waa in maanka lagu hayo in beegyada uu aad u hooseeya, waxay keeni in tirada file yar iyo video tayo hooseeyo. Settings si fudud u helaan karaa iyadoo la isticmaalayo button goobaha waxaa ka mid ahaa in software ah.
Talaabada 4: dooro meesha file
By hadda aad u badan tahay ayaa diyaar u ah inuu ku soo bilowdo riixo. Si kastaba ha ahaatee, qaado waqti ah oo qabaa, halkaas oo aad rabto in aad file lahaa wax soo saarka si ay ku yaalaan. Users si fudud u dooran kartaa folder la rabay wax soo saarka ka bar hoose.
Talaabada 5: diinta Bilow
Marka aad loo dhammeeyo dhammaan tallaabooyinka hore, ka dibna aad diyaar u tahay in ay tagaan. Hadda waxaad riixi kartaa batoonka diinta iyo samir ku sug, sida aad filimka waxaa loo baddalaa iyo in geeddi-socodka, jidkuna waa in size yar. Waa in la ogaadaa in software waa mid aad u hufan ee riixo of videos iyo mid si fudud ula socon karaan muddo ka hartay inta ay socoto. Si aad u argto faylka Tifaftirayaasha, mid si fudud u riixi kartaa doorasho file aragtida iyo dooro file gediyay.
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa H264 File